“တစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်းများ (03.10.2019 မှ 09.10.2019 အထိ)”
“တစ်ပတ်စာ (၇)ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်းများ (03.10.2019 မှ 09.10.2019 အထိ)” တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်းအလုပ်တွေကိုခက်ခဲကျဉ်းကျပ်စွာလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရတတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ခွင့်ယူမှု တွေများနေတတ်ပါတယ်။ လက်ဝယ်ရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ အပျက်များနေတတ်ပါတယ်။ သို့သော် မိသားစုဝင်များနဲ့ အတူတူလုပ်တဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေးတွေကတော့တိုးတတ် လာတတ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီး တဲ့သားသမီးတွေ ခရီးထွက် စီးပွားရှာတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ ညီ၊ ညီမငယ်များရဲ့ […]
“ယူနီကုဒ် (Unicode) ထည့်သွင်းလို့မရနိုင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးစားများ…”
“ယူနီကုဒ် (Unicode) ထည့်သွင်းလို့မရနိုင်တဲ့ ဖုန်းအမျိုးစားများ…” ယူနီကုဒ်ပြောင်းတဲ့ နေရာမှာ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကို ဒီလို အုပ်စုခွဲလို့ ရပါတယ်… အုပ်စု (၁) ဖောင့်နေရာမှာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်တစ်ခုခု ပြောင်းလိုက်ရုံ ဒါမှမဟုတ် မူလပါပြီးသား default ကို ထားလိုက်ရုံ၊ language နေရာမှာ ရွေးလိုက်ရုံနဲ့ ယူနီကုဒ်ဖြစ်သွားတာ။ ဥပမာ […]
“(10) လပိုင်းအတွက် ၇ရက်သားသမီး တစ်လစာ ဟောစာတမ်း”
တနင်္ဂင်္နွေသားသမီးများအတွက် အိမ်အသစ်ဆောင်မည့်ကိစ္စ အဆင်ပြေအောင်မြင်မည်။ ရပ်ဝေးမှာ သတင်းကောင်းကြားရတတ်သည်။ မိတ်ဆွေများ ၏ ကူညီမှုရရှိမည်။ စပ်တူ လုပ်ငန်း များ လုပ်ရ ကိန်း ရှိပါတယ်။ သင်တန်းတက်ရခြင်း ၊ ဆရာသမားလို ပုဂ္ဂိုလ် များ ကူညီစောင့် ရှောက်ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ ရွှေဝယ်မည့်ကိစ္စပျက် တတ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူး […]
“ရန်ကုန် -ပြည် ကားလမ်းပေါ် ကျောင်းသူ ၃ယောက် ကားတိုက်ခံရ ၂ဦးပွဲခြင်းပြီးသေ”
“ရန်ကုန် -ပြည် ကားလမ်းပေါ် ကျောင်းသူ ၃ယောက် ကားတိုက်ခံရ ၂ဦးပွဲခြင်းပြီးသေ” ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နာရီဝန်းကျင်ခန့်က တက်လာခဲ့တဲ့ ကားတိုက်မှု အခင်းဖြစ်စဉ် သတင်းအရ ရန်ကုန် -ပြည် ကားလမ်းပေါ်မှာ ကျောင်းသူ ၃ ဦး ကုန်တင်ကားနဲ့ အတိုက်ခံရပြီး ကျောင်းသူ ၂ဦးဟာ […]
“ဇွဲကပင်မြေ မှ ကရင် မောင်နှမ နှစ်ဦး၏ သမိုင်းပုံပြင်??”
“ဇွဲကပင်မြေ မှ ကရင် မောင်နှမ နှစ်ဦး၏ သမိုင်းပုံပြင်??” ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ရှိ အလွန်ပင်ထင်ရှားသော ဇွဲကပင်တောင် သည် ထူးဆန်းသော ပုံပြင်လေး တစ်ပုံရှိခဲ့ပါတယ်… ဒီပုံပြင်လေးသည် “ ဇွဲကပင်တောင်ကြီး ကို တိုင်တည်လို့ ရုပ်ပုံထင်ရှား ဇွဲကပင်တောင်တန်းမှာ မိကွဲဖကွဲ ပထွေးနှိပ်စက်မူ ဖြစ်လေရာဘ၀ဆက်တိုင်း ကင်းလွှတ်ပျူဌာ […]
“ခွေးတောက်ရွက် ကို ခေါင်းအုံးအိပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး…”
“ခွေးတောက်ရွက် ကို ခေါင်းအုံးအိပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး…” ခွေးတောက်ရွက် ခေါင်းအုံး အ မျိုး သ မီး တ ယောက် အဲ ကွန်း ခန်း ထဲ အိပ် ပျော် သွား တယ် ။ ဘယ် လောက်အိပ် မိ တာ […]
“(၈)တန်းကျောင်းသူလေးကို ခိုးယူထွက်ပြေးတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကို မိသွားပါပြီ”
“(၈)တန်းကျောင်းသူလေးကို ခိုးယူထွက်ပြေးတဲ့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကို မိသွားပါပြီ” ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ပြည်ခရိုင်၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ် ၂.၁၀.၂၀၁၉. (၀၂၀၃၀) နာရီအချိန်ခန့်တွင် ဥသျှစ်ပင်နယ်မြေ တာဝန်ခံ စရဖ ကျော်မင်းထွန်း၊ နယ်မြေခံရဲစခန်းမှ စခန်းမှူးရဲအုပ်သန်းလှနှင့် အဖွဲ့များ ကျောက်ဖူးကျေးရွှာအုပ်ချု ပ်ရေးတို့ ပူးပေါင်း၍ ခိုးယူထွက်ပြေးသွားသော ဘုန်းကြီးအား ကျောက်ဖူးကျေးရွှာအုပ်စု၊ ဆင်လူးရွှာတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်၊ […]